जेठ महिनामा अधिकमास : विशेष कामनाका कर्म नगरौँ « प्रशासन
जेठ महिनामा अधिकमास : विशेष कामनाका कर्म नगरौँ
काठमाडौं । जेठ महिनामा अधिकमास परेको छ ।
जेठ १ गते साँझ ५ बजेर ५३ मिनेटपछि अधिकमास शुरु हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । अधिकमास भन्नाले सामान्यभन्दा बढी भएको महीना बुझिन्छ । मंगलबार साँझ ५ बजेर ५३ मिनेटसम्म औँसी रहेको छ । जेठ १ गते शुक्ल प्रतिपदाको आदिमदेखि अधिकमास शुरु हुने र औँसीको अन्त्यसम्म अर्थात् जेठ ३० गते राति २ बजेसम्म रहने समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
“ज्येष्ठ चान्द्रमासमा सूर्यसंक्रान्ति नपर्ने भएकाले यस वर्ष जेठमा अधिकमास परेको हो, अधिकमासलाई मलमास र पुरुषोत्तममास पनि भनिन्छ, यो महीनामा नित्य र नैमित्तिक कर्म गर्नुहुन्छ र कुनै कामना राखेर गर्ने कर्म गर्नुहुँदैन”, उनले भने।
“एक वर्षभित्र विवाह भएका पतिपत्नीबीच समागम भए पतिको आयु क्षीण हुन्छ, यसबीचमा गर्भ रहे स्वस्थ सन्तान जन्मदैन, आयु पनि थोरै हुन्छ भन्ने धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ”, उनले भने । अधिकमास लाग्नुअघि नगएका तीर्थमा यस महीनामा पहिलो पटक जान र दर्शन नगरेका देवताको दर्शन गर्न पनि शास्त्रीय रुपमा बन्देज छ । यस महीनामा मन्दिर निर्माण र कुनै देवीदेवताको प्राणप्रतिष्ठा गर्न पनि मनाही गरिएको छ ।
सूर्यको गतिकलाका आधारमा गणना गरिने मानलाई सौरमान भनिन्छ । तिथिका आधारमा गणना गरिने मान चान्द्रमान हो । एक वर्षमा १२ सौरमास र त्यति नै संख्यामा चान्द्रमास हुन्छन् । कहिलेकाहीँ एक वर्षमा १२ सौरमास भए पनि चान्द्रमासको संख्या १३ हुन पुग्छ । त्यस्तो समयमा एकै चान्द्रमास दुई पटक देखापर्छ अथवा चान्द्रमासको पुनरावृत्ति हुन्छ । त्यसरी पुनरावृत्ति भएर नित्यभन्दा बढी भएको चान्द्रमास नै अधिकमास भएको वाल्मीकि विद्यापीठ ज्योतिष विभागका उपप्राध्यापक पुरुषोत्तम भट्टराई बताउँछन् ।
“सूर्यसङ्क्रान्तिदेखि गतेका आधारमा मानिने, हामी सबैले बुझेको र व्यवहार गरिरहेको मास नै सौरमास हो, सूर्य र चन्द्रमाको अन्तर नै तिथि हो, यी दुईको अन्तर १२ अंश हुँदा एक तिथि हुन्छ, १५ तिथिको एक पक्ष हुन्छ, शुक्ल पक्ष (शुक्लप्रतिपदाबाट पूर्णिमासम्मको पक्ष) र कृष्णपक्ष (कृष्णप्रतिपदाबाट औँसीसम्मको पक्ष) गरी दुई पक्ष वा तीस तिथिको मास नै चान्द्रमास हो”, उनले भने ।
विशेष कामनाले गरिने एकाह, सप्ताह, नवाह, लक्षहोम, कोटिहोम, श्रौतयाग, स्मार्तयागजस्ता कर्म अधिकमासमा गर्नुहुदैन । पुराणवर्णित पुरुषोत्तम भगवान्को पूजाराधना, व्रतोपवास र अपुङ्गो दान आदि कर्म भने अधिकमासमा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
जेठ महिनाको अधिकमासले शासक र शासित वर्गबीच वैमनश्यता बढाउँछ । शासक वर्गबाट जनता त्रसित हुने उपप्राध्यापक भट्टराई बताउँछन् । करीब एक हजार ५०० वर्षअघि बराहमिहिरको पालादेखि शुरु भएको सूर्य सिद्धान्त आधार मानिने पञ्चाङ्ग गणना पद्धतिअनुसार फागुनदेखि असोजसम्ममा अधिकमास पर्छ ।
28 July, 2021 2:10 pm
अस्पतालबाट २०३ दिनपछि डिस्चार्ज
काठमाडौँ । अमेरिकामा एक कोरोना सङ्क्रमित अस्पताल भर्ना भएको २०३
28 July, 2021 2:04 pm
डारफोरबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनका शान्ति सैन्य फिर्ता
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डारफोरमा रहेको मिसनबाट शान्ति सैनिकहरु